Put someone on edge
ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်သတင်းလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ဖြစ်တဲ့ Put someone on edge, Hunker down နဲ့Feel the pinch တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Put someone on edge
Put (ရှိစေတာ)၊ someone (တဦးတယောက်)၊ on edge (အစွန်းပေါ်မှာ) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က လူတဦးတယောက်ကို အစွန်းကို ရောက်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကလည်း သိပ်မကွာလှပါဘူး။ လူတဦးကို အစွန်းကို ရောက်စေတယ်ဆိုကတည်းကိုက အစွန်းနားမှာ ရောက်နေတဲ့ လူကအောက်ကို လိမ့်ကျမှာ ကြောက်တာမို့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်တဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံ သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်စေတာ၊ ကြောက်လန့်စေတာ၊ အလန့်တကြား ဖြစ်စေတာ၊ တခုခုဖြစ်မှာကို ရင်တမမနဲ့စောင့်နေရတဲ့ အနေအထားမျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို Caribbean ပင်လယ်မှာ Hurricane Dorian ဟာ မုန်တိုင်း category ၄ အဆင့် ၊ တနာရီ မိုင် (၁၅၀) လေတိုက်နှုန်းနဲ့ Bahamas ကျွန်းကို ၀င် တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက် ဆက်တိုက်ရာမှာပထမဆုံး Florida ပြည်နယ်ကိုဝင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ မုန်တိုင်းတိုင်းတာရေးစခန်းတွေက ရုပ်ပုံတွေနဲ့တကွ TV တွေနဲ့လူမှုကွန်ယက်တွေကတဆင့် အချိန်နဲ့ တပြေးညီတင်ပြတင်ခဲ့ကြရာမှာ၊ မုန်တိုင်းလာမယ့် လမ်းကြောင်းကျနေတဲ့ဒေသတွေရဲ့ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကလည်း ဘေးကင်းရာထွက် ပြေးခိုလှုံကြဖို့အများပြည်သူကို သတိပေးနှိုးဆော်ချက်တွေ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသလို၊ ဒေသခံတွေကလဲ မုန်တိုင်းဘေးအတွက်က ကာကွယ်ဖို့ နေအိမ်တွေကို ကာရံကြ၊ အစားအသောက်တွေ၊ သောက်ရေတွေ သိုလှောင်ကြပြီး၊ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ Hurricane Dorian ၀င်မဲ့အချိန်ကို စောင့်နေကြတဲ့အတွက် Florida ထုတ် Palm beach post သတင်းစာကြီးက
“Hurricane Dorian: Track keeps Florida on edge” ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
The threat of bomb attacks by militants put civilians “on edge.”
ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်မယ်လို့့ စစ်သွေးကြွတွေ ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် ဒေသခံတွေလည်းစိုးရိမ်ထိတ်လန့် နေကြတယ်။
Hunker က (ဒူးကွေးပြီး ပုဆစ်တုပ်ထိုင်ချတာ) down (အောက်) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က အောက်ကိုပုဆစ်တုပ် ထိုင်ချလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Hunker က (၁၈) ရာစုက စကော့တလန်အသုံးဖြစ်တဲ့ Huka ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး ဒူးကွေးပြီး အောက်ကိုထိုင်ချတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အခါမှာ အောက်ကို ပုဆစ်တုပ် ထိုင်ချပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေး ပုန်းနေတတ်သလို၊ အီဒီယံဆိုတဲ့ သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က အန္တရာယ်ကင်းးတဲ့နေရာမှာ ခိုလှုံထာ၊ ပုန်းအောင်းတာ၊ လာမဲ့ဘေးကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကိုယ်ကိုယ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်၊ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် တောင့်ထားတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်း ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာကနေ မခွါဘဲ အတတ်နိုင်ဆုံး အန္တရာယ်ကင်းအောင် နေတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ တခါတရံလဲ လူတဦးက ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ပတ်သက်လို့သူများ ဘယ်လို မြင်ပစေ ကိုယ်ကဆက်ပြီး မဆုတ်မနစ် ဆုပ်ကိုင်တာမျိုးကိုလည်း Hunker down ဆိုတဲ့ အသုံးနဲ့ ရည်ညွှန်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို Caribbean ပင်လယ်မှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ Hurricane Dorian နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၊ Bahamas မှာအပျက်အစီးကြီးခဲ့ပြီး၊ လူသေဆုံးမှုတွေ ရှိစေခဲ့တဲ့ ဒီမုန်တိုင်းကြီးဟာ အင်အားပျော့ခဲ့ပေမယ့် အန္တရာယ်ကြီးနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် အမေရိကန်အရှေ့တောင် ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက် တိုက်ခတ်ရာမှာ Florida အပြီး Georgia အပြင် မြောက်နဲ့ တောင် Carolina ပြည်နယ်တွေဆီရောက်ပြီး၊ လေပြင်းနဲ့အတူမိုးတွေကြီးပြီး ရေလျှံမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလို မဖြစ်မီ စောစောပိုင်းက Dorian မုန်တိုင်းကြီးဟာ ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် တရွေ့ ရွေ့  ဦးတည်လာနေတာကို Carolina ပြည်နယ်သားတွေ မုန်တိုင်းဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် ဘေးအန္တရာယ် အကင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့အတွက် Accuweather.com မှာ “Carolinas hunker down as Dorian sets its sight on the coast “ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
We “hunkered down” at home during the recent hurricane.
မကြာသေးမီက hurricane မုန်တိုင်းကျခဲ့စဉ်က ကျနော်တို့တွေ အိမ်မှာ ဘေးကင်းအောင် နေခဲ့ကြတယ်။
(၃) Feel the pinch
Feel (ခံစားရတာ)၊ the pinch က အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ လက်နဲ့ဆိတ်တာ ဖြစ်နိုင်သလို၊ ဘိနပ်ကျပ်လို့ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှုကိုလည်း ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကားစုတခုလုံးရဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က အဆိတ်ခံရလို့ဖြစ်စေ၊ စီးတဲ့ဖိနပ်ကျပ်လို့ဖြစ်စေ နာကျင်မှုကို ခံစားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။နာကျင်မှု ခံစားရရင်၊ မျက်နှာရှုံ့မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်း၊ ကိုယ့်အိတ်ထောင်မှာ ငွေမရှိရင် စိတ်ချမ်းသာမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအသုံးရဲ့ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ် ငွေရေးကြေးရေး ကျပ်တည်းတဲ့ဒဏ်ကို ခံစားရတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ငွေမရှိလို့ သိပ်ကို ခြိုးခြိုးခြံခြံ ချွေတာနေရတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump နဲ့တရုပ်သမ္မတ Xi Jingping ကြား နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးစစ် ဖြစ်နေကြပြီး ဘတပြန်၊ ကျားတပြန် တုံ့ ပြန်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြရာမှာ သမ္မတ Trump က စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့ ကစပြီး တရုတ်က အမေရိကန်ကိုသွင်းနေတဲ့ ဒေါ်လာ (၁၁၂) Biilion ဖိုးကုန်စည်တွေအပေါ် အခွန်ငွေ (၁၅)% စည်းကြပ်လိုက်တဲ့အတွက် အဲဒီကုန်စည်တွေမှာ ၊ လက်ပတ်နာရီတွေ၊ TV တွေ၊ ဖိနပ်တွေ၊ အားကစားပစ္စည်းတွေ ၊ အသားနဲ့နိူ့ထွက်ပစ္စည်းတွေစတဲ့ လူသုံးကုန်တွေပါတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခွန်တိုးကောက်ခံရတဲ့ ဒီကုန်စည်တွေအပေါ် တရုတ်ကလည်း ဈေးလိုက်မြှင့်တာမို့၊ အဆုံးမှာ အမေရိကန်စားသုံးသူတွေပဲ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်တဲ့ဒဏ်ကို ခံကြရတော့မယ်မှာဆိုပြီး Readingeagle.com မှာ “U.S. consumers about to feel pinch of tariffs” ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Many families are “feeling the pinch” because of rising consumer prices.
စားသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ ဈေးတက်တဲ့အတွက် မိသားစုအများအပြားဟာ အတော်လေး ငွေရေးကြေးရေး ကျပ်တည်းနေကြတယ်။